सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ?
माघ १३ गते, २०७६ - १८:००
काठमाडौं । नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीबीच भेटवार्ता भएको छ । सपथ ग्रहण लगत्तै सापकोटा र राजदुत यान्छीबीच सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटवार्ता भएको हाे ।
सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूत यान्छीबीच करिब आधा घण्टा जस्तो कुराकानी भएको थियो । नवनियुक्त सभामुख सापकोटालाई भेटेरै शुभकामना दिने चिनियाँ राजदूत यान्छी नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगको पहिलो व्यक्ति हुन्।
निर्विरोध सभामुख निर्वाचित सापकोटाले सोमबार बिहान पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।
सापकोटा र चिनियाँ राजदुतबीच भएको भेटवार्तामा चिनियाँ राजदुत यान्छीले सापकोटालाई कार्यकालको बधाई तथा शुभकामना दिएकी थिइन् ।
सापकोटा र यान्छीबीचको भेटमा चीन नेपाल सम्बन्धको बारेमा छलफल भएको थियो । राजदूत हउ यान्छीले चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षज्यूको तर्फबाट सभामुख सापकोटालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिइन् । सभामुखको कार्यकाल सफलताको शुभकामना तथा बधाई दिँदै शपथ ग्रहण गरेको तीन घण्टाभित्रै शिष्टाचार भेटका लागि समय दिएको राजदूत हउ यान्छीले सभामुखलाई धन्यवाद दिइन्।
राजदूतले यान्छीले दुई देशका संसदको बीचमा सम्बन्ध बिस्तार गर्न आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने कुरामा कमी आउन नदिन र नेपाल भ्रमण वर्षलाई असर पर्न नदिन चीन सरकार सचेत रहेको राजदूत हउ यान्छीले बताइन् । सापकोटाले आगामी मार्चमा हुन गइरहेको चिनियाँ जनकंग्रेसको संयुक्त सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना दिए ।
माघ १३ गते, २०७६ - १८:०० मा प्रकाशित
झुट्टा लाञ्छना लगाएको भन्दै विजय मिश्रविरुद्ध बाँस्कोटाले गरे मुद्दा दायर
बच्चा बोकेकी महिलामाथि पुरूष प्रहरीको लाठी, घटना कसरी र कहाँ भएको थियो ?
सगरमाथाको उचाइ नाप्‍ने काम ९० प्रतिशत सम्पन्‍न : मन्‍त्री अर्याल
राष्ट्रिय सभामा एउटा सिट बाँकी छ, त्यहा बामदेव गौतमनै जानुहुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड